Kunyora nezve kunyora. Zvinyorwa zvekufungidzira paZuva reBhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Kunyora nezve kunyora. Zvinyorwa zvekufungidzira paZuva reBhuku
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Literature
Mufananidzo wepakati: (c) Rafael Plaza Aragonés. Mamwe ese ari kubva kumafaira angu ega uye nemabhuku angu.
In the Zuva reBhuku ndinonyora nezve kunyora. Vashoma mafungiro mushure menguva inguva yehupenyu ndichiisa mazwi pamwechete kubvira pandakadzidza kuzviita kuti ndizviudze ini nekutaura nyaya. Zvikonzero kana zvikonzero, kana kungofara. Uye gara uri kusurukirwa o kubvisa, in silence kazhinji, kana mu rima. Izvi ndizvo zvikonzero zvangu. Unogona kuvagovana navo vaunoshanda navo, kunyangwe kana vari vakasarudzika uye vasingachinjiki.
1 Kudzidza kunyora
3 Rusununguko nesimba
4 Zvinetso zvekusika
5 Nyora nekuti
Mifananidzo iri pamusoro pechinyorwa ichi inoratidza shanduko ye runyoro rwangu uye mafonti andinoda ekudhinda. Zvakare kutanga kweimwe nyaya dzangu. Yokutanga, kurovedza nyaya dzekuchikoro izere nezvikanganiso zvezviperengo.
Gare gare tsamba iyoyo inonyorwa uye inosiyana mukati nyaya dzekuyaruka. Uye pakupedzisira, mavara anova makiyi uye nyaya uye nyaya dzacho dzinova novels. Maviri akatoburitswa, imwe kuburikidza neyekunyora uye imwe yacho kuburikidza nekuzvitsikisa-yega. Nekuti ini ndakadzidzawo kuvapa fomu yemuviri kubva mumabhuku.
Uye nei tichinyora kuti tinonyora? Mwanakomana zvikonzero zvakawanda sevanyori uye zvirokwazvo isu tese tinovagovana. O pamwe hapana chaicho chaicho. Kungofara kana kutyisa kwekugadzira nyaya, zvakasikwa uye hupenyu zvausingazive kuti uchabuda sei kana kuti ivo vachazokuendesa kupi. Kunyangwe iwe uchidhonza tambo. Iyo poindi ndeyekuti isu hatimire kudzidza kudzidza kuzviita.
Iko kunogara kune nyaya kunze uko kana mukati mukati. Dzimwe nguva mufananidzo unovapa kwauri (zvakaitika kwandiri kanopfuura kamwe), dzimwe nguva rwiyo (zvave zviri nyaya yangu), kana ruzivo rwechokwadi chaunorarama. Zvakanaka, zvakaipa kana pakati. Iko kune zvakare mamiriro ako ega zvimwe kana zvimwe zvaunofanira kuongorora, nzwisisa kana kududzira. La ChokwadiZvisinei, inogara ichidarika fungidziro uye tinoda kuda kuzvitsanangurira. Kana ku zvisiyanise pakuda kwedu nenzira.
Iko kune zvakare kudiwa kwekutaura kune avo, seni, vasinganyatsogona pamashoko nezwi. Uye zvakare kune kwakapararira kutenda nezve kupomerwa kugona yemunyori kutarisana kana bata nemamiriro matsva chaiwo. Hausati wasangana nazvo asi wakakwanisa kuzvidzokorora, saka unogona kuzokwanisa kuzvibata zviri nyore. Asi ini ndinongobvuma kuti zvinogoneka, kwete kuti ichokwadi.
Izvo zvinobvumidza kuzviita na rusununguko rwakakwana kushandisa chero chishandiso. Kana kuva chero waunoda. Uye zvakanakisa: tamba kuva mwari ine simba rekupa uye kutora hupenyu mune chero chaicho kana chakanakisa chisiko. Kunyangwe zvakanyanya. Iyo seti inosanganisira zvese shanduko pahunhu, zera, bonde, chimiro, nyika, mutauro, uye ruvara yeganda. Iko hakuna zvakare kurambidzwa. Sa mwari zvauri, iwe unogona zvakare kusarudza kuve dhimoni. Uye hapana chinoitika.
Iko hakuna kudzvinyirira uye hapana kurongeka kwezvematongerwo enyika. The vadetembi, vandinoyemura nekukudza samasters ekubatanidzwa kwemazwi, vanoafambisa achigadzira zvimiro, achivatenderedza uye achivapa nerunako runoshamisa. Avo vedu vari vazhinji prosaic uye isu tinotaura nyaya dzakafanana pane imwe nhanho, tinonakidzwawo nemukana iwoyo. Uye isu tinotora mukana nazvo, kana chete mungano.
Imwe kesi: avo vedu vanofarira nhema nhema Takazvibvunza nguva zhinji kuti uyu kana iye munyori anogona sei kuronga zvakaipa zvakawanda, hutsinye uye zvimwe zvinokatyamadza zvinowanzoitika kune ane utsinye psychopath. Asi ingori nyaya yekutamba nayo yakakosha uye yepasirese manzwiro uye manzwiro ehunhu hwevanhu, akanakisa uye akaipisisa.
Kune zvakare akawanda kesi dze vanyori vakaponesa kubva pahupenyu hwavo nekuda kwemabhuku. Kwete chete kwekubudirira kwavakawana, asi kuruponeso chairwo nekudzivirira kuvavapedza nenzira yakaipa kwazvo. Unongofanira kuverenga, semuenzaniso, Makona angu erimanaJames Ellroy.
Iko kusununguka nesimba zvinotibvumidzawo kupinda mumapindu ayo dzimwe nguva anogona kunge akakora zvakanyanya. Saka takatsvaga vatungamiriri. Ndipo panomuka mubvunzo unozivikanwa: Isu tinofanirwa here kuva nezviitiko zvatinonyora nezvazvo? Zviri pachena kwete. Uye zviripachena zvakare kana isu tinavo, tinogona kuvaudza pekutanga-ruoko. Asi iyo poindi ndeyekuti pamwe, kana tikazvishandisa, hatizozviita sezvatakazvirarama chaizvo muzuva ravo.
Nguva mubatsiri mukuru. Inopa nuance uye maonero. Kunyanya kana yapfuura. Kune avo varipo iye zvino vasingatipe isu chimwe chishuwo chakanyanya kudarika icho chekurarama nenzira yakanaka, yekupedzisira zvakasikwa zvese pachazvo. Zvinogona fungidzira uye tangazve, vanotogadzira kubva mukukwira kwavo. Zvimwe chete naiye ramangwana, yakakura kwazvo kugadzira uye kufungidzira. Kunyora uye pamwe kuti zviitwe nemazvo.
Dambudziko rese iri rinogona kubatsira tsvaga izwi rinorondedzera. Pasina nguva refu mumwe munhu anoda kutanga kunyora akandibvunza. Asi ini handina munhu wekutungamira kana kupa rairo. Imwe neimwe yakasiyana uye ini ndakangokurudzira yakakosha chete: "nyora pane zvaunoda, zvaunoda, uye edza manzwi." Hapasisina. Ivo vanogona zvakare kukudzidzisa iwe, Zvidzidzise, ​​asi tanga iwe unofanirwa kuzviedza wega kunyangwe ukakanganisa mapepa churu. Uye pamusoro pezvose iwe unofanirwa kuramba uchiverenga. Ndidzo here kufarira kuverenga uye mhando izvo zvakare zvinotaridza zvemukati uye masitayera ako.
Simply. Hapana zvikonzero. Chete nekuda kwekuzviita. Kurova makiyi kana kutsvedza penzura kana peni paminwe yako pane isina chinhu, yemagetsi, kana pepa kanivhasi. Dzimwe nguva inenge iri chirevo chimwe chete kubva pane zano rakabatwa panhunzi kana kubva pane kufunga kwatinogona kushandisa yenyaya iyoyo kana nhetembo. Uye dzimwe nguva hongu ndizvozvo Kufuridzirwa izvo zvinoonekwa pazvisingatarisirwe. Vamwe vanogona kunge vari vanozivikanwa rwizi rwekuziva, Saxons vanoti kudii, izvo rwizi rwekuziva kana psychonarration uko pfungwa dzinoyerera pasina kuoneka kudzora.
Asi nguva dzose, nguva dzose, ndega kana mukubvisa. Yenguva nenzvimbo. Nezvedu pachedu. Kuti ubude mairi kana kuishandura kana kuiganhura nezviuru. Nekuti tinoda kunyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Kunyora nezve kunyora. Zvinyorwa zvekufungidzira paZuva reBhuku
Caballo de Troya, naJJ Benítez. Makore makumi matatu nemashanu echinyakare saga